Taorian’ny Fanafihana Tao Nice, Fotoana Izao Hanajantsika Miaraka Ny Fangirifiriana Mihatra Na Aiza Na Aiza · Global Voices teny Malagasy
Taorian'ny Fanafihana Tao Nice, Fotoana Izao Hanajantsika Miaraka Ny Fangirifiriana Mihatra Na Aiza Na Aiza
Voadika ny 17 Jolay 2016 6:57 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, عربي, Français, русский, polski, বাংলা, English
Teraka tany Nice aho, tany Frantsa, izay niasan'ny ray aman-dreniko nandritra ny roa taona alohan'ny niverenany tany Madagasikara. Nampianarin'i dadabe nandeha aho tao Arènes de Cimiez, zaridaina iray miorina eo amin'ny tehezan-tendrombohitra ao amin'ny tanàna. Ary niaraka taminy teo amin'ny zaridaina fony izaho telo taona raha tratran'ny fahatapahan'ny lalandra voalohany izay nitondra ho amin'ny fahafatesany taona vitsivitsy taty aoriana.
Raha nijery ny korontana tao amin'ity tanàna ity aho nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena omaly alina, nataon'ilay lehilahy adala nitondra ilay kamiao nandona olona an'arivony, nahafaty olona 80 farafahakeliny, torotoro ny fanahiko mahita ny sarin'ireo ankizy, vehivahy ary lehilahy mihazakazaka sady mikiakiaka raha mandeha mafy tahaka ny dragona manatona azy ny kamiao iray.
Nifoha maraina tamim-pahatezerana sy fahalahelovana ny fianakavian'ny niharam-boina, ny mponina, ny mpiara-miasa na mpiara-mianatra, miezaka mahatakatra ny nahazo ireo olon-tiana sy ny tanàna tao anatin'ny fahatafintohinana. Ity no fanafihana fahatelo teo amin'ny tany frantsay tao anatin'ny 20 volana. Nambara ny andro fisaonana, ary nitarina telovolana fanampiny ny tany anaty hotakotaka taorian'ny fanafihana tamin'ny Novambra (izay tokony nofaranana tamin'ny 26 jolay). Iny ihany koa no iray amin'ny fandripaham-bahoaka farany nitranga manerana izao tontolo izao tao anatin'ny volana vitsivitsy.
Alohan'ny hamantarana ny antony, sy iza ary ahoana no isorohana izany, dia ity misy fiangaviana ho antsika handeha moramora kokoa amin'ny fanaovana fanadihadiana sy ny maika tsy faingana. Aoka isika tsy hiezaka hahatakatra na hahita vahaolana iray amin'ny olana iray goavana mahatratra ny tany iray manontolo—tsy izany ihany. Aoka isika tsy hiezaka ny hampitaha ny ambaratongam-boina, ny halalin'ny fangirifirian'ny olona. Aoka isika, amin'izao fotoana izao, hanaja ny fangirifiriana. Ny fangirifiriana eny rehetra eny.
Nihalehibe tany Madagasikara aho, Isaky ny misy loza any, dia saika mitovy hatrany ny dingana atao: miaraka ny fianakaviana sy ny mpinamana hikarakara ny maty, mampiakanjo azy araka izay tsara indrindra hikarakarany ny diany [any ankoatra]. Avy eo, ny fianakaviana sy ny havana akaiky mandany ny alina amin'ny resaka, hiarahana fotsiny. Ny hany lohahevitra azo resahina dia ny mifampizara fahatsiarovana: tsy misy nahoana, tsy misy raha hoe, tsy misy [fa] saingy…
Joro iray ijerena ny “promenade des Anglais” tany Nice nandritra ny alina avy amin'i W.M Connolley- CC BY-SA 3.0
Voadona ny tanàna nahaterahako, noho izany dia voadona aho, na dia nipetraka tany an-kafa aza aho nandritra ny fiainako maha-olon-dehibe. Niverina tany Nice aho tamin'ny herintaona. Tsy nitsidika ny Promenade des Anglais aho, izay nitrangan'ny loza, fa nandehadeha tany amin'ny distrika manodidina naka ny hakanton'ny voninkazo teny amin'ny tsenan'ny voninkazo sy ny fijerena avy eny amin'ny havoana.
Ankehitriny aho vao afa-mieritreritra ny fahapotehan'ireo toerana ireo, sy ny reniko amin'ny batemy (batisa) izay mety mikarakara ny maratra. Mieritreritra ny namana mpiara-miasa ato amin'ny Global voices tahaka an'i Abdoulaye, izay niverina nankany an-tranony minitra vitsy monja talohan'ny nivadihan'ny zavatra rehetra ho helo. Angamba ilay gazety mpananihany vaovao Le Gorafi irery ihany no nahavita mampiseho ny fahatsapana tao amin'ny rehetra, namoaka teny tokana teo amin'ny voaloham-pejiny: Non.
Sarotra hazavaina sy sarotra takarina hatry ny ela ny fahavitrihana ara-piarahamonina ao Nice. Raha fantatra manerantany ho tanàna fizahatany manamorona ny Côte d'Azur ny tanàna, dia tsy misakaiza mihitsy amin'ny vahiny sy ny vitsy an'isa izy. Tsy fantatsika ny ho tohiny taorian'ny fanafihana, fa afa-manantena isika ny isian'ny firaisankina ao anatin'ny lalana mankany amin'ny fanasitranana. Fantatro tsara fa vao nandrava ny faritra maro manerana izao tontolo izao ny asam-pampihorohoroana, hatrany Baghdad ka hatrany Baton Rouge. Maro amintsika no mahalala izany hoe tahaka ny ahoana izany mamoy hava-tiana/zava-tiana noho ny antony izay tsy takatsika tsara. Tsy samy hafa isika raha oharina amin'izany fanajana izany.
Saingy ankehitriny isika aleo mijanona amin'ny anio. Andao isika hanaja ireo fianakaviana sy namana malahelo, ary amin'ny fanaovana izany isika no manome voninahitra ireo voina efa nitranga teo aloha. Izany no fomba hanombohantsika miaraka ny fanasitranana.